ANDROID ပေါ်မှာစကားဝှက်ကို RESET လုပ်နည်း - အန်းဒရွိုက် - 2019
Android ပေါ်မှာ Password ကို Reset
အန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်းများ၏ဟာ့ဒ်ဝဲမှလေးစားမှုနှင့်တကွ, Samsung ကအားဖြင့်လူသိများတဲ့ထုတ်လုပ်မဆိုဝေဖန်ခဲရှိပါသည်။ ဟင်းချိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်တာရှည်သုံးစွဲခြင်းစဉ်အတွင်း software ကိုစိတျအပိုငျး, တခါတရံတွင်သူကလုံးဝနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဖုန်းကိုလည်ပတ်စေသည်သောစနစ်တကျ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်မှစတင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, လမ်းထွက်ပြီးနောက်ကိရိယာ၏ operating system ကိုတစ်ဦးပြည့်စုံပြန်လည် install ပြုလုပ်လည်းမရှိ, မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပစ္စည်းလေ့လာနေပြီးနောက်, သင်ကမော်ဒယ်က Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 ပေါ်မှာဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုထုတ်တင်ဆောင်လာသောများအတွက်ဗဟုသုတနှင့်အဆောက်အဦးများရပါလိမ့်မယ်။
device ကို Samsung က GT-S7262 အချိန်ကြာမြင့်စွာဖြန့်ချိသည်နှင့်ကိုင်တွယ်နည်းလမ်းများသည်၎င်း၏စနစ်ဆော့ဝဲ tools များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အသုံးပြုကတည်းကအလေ့အကျင့်အတွက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုများသောအားဖြင့်ဤပြဿနာကိုပျေါပေါကျပါဘူးဖြေရှင်းရေးအတွက်ပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဆော့ဖ်ဝဲစမတ်ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲလေးနက််ရောက်စွက်ဖက်ရန်ရွေ့လျားမီ, သတိရ:
အားလုံးအောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များကသူ၏ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာအသုံးပြုသူအစပျိုးခြင်းနှင့်ကောက်ယူနေကြသည်။ device ကို၏ပိုင်ရှင် မှလွဲ. မည်သူမျှ, စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်လုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏အနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များအတွက်တာဝန်မယူပါ!
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ firmware ကို GT-S7262 ဖုန်းစနစ်တကျပြုလုပ်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဒါ့အပြင်အများဆုံးနည်းလမ်းများအတွက် internal memory device ကို manipulate ရန် tool ကိုအဖြစ်အသုံးပြုမယ့်သေးငယ်တဲ့ setting ကိုကွန်ပျူတာလိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ, အဲဒီနောက်အန်းဒရွိုက်ပြဿနာများမရှိဘဲလွန်သွားပါလိမ့်မယ်, သင်လိုချင်သောရလဒ်ရလိမ့်မယ် reinstall - device ကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်ပြီးခဲ့သည့် Samsung ၏အန်းဒရွိုက်-device များအတွက်အထူးပြုယာဉ်မောင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီး, Microsoft Windows နဲ့ပြေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဆော့ဖျဝဲ package ကို Kies ကို install ဖို့လုံလောက်တဲ့ - လိုအပ်ပါကထုတ်လုပ်သူရဲ့တယ်လီဖုန်းကအရမ်းရိုးရှင်းစွာကုသကြသည်နှင့်တကွ, လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို Install လုပ်ပါ။
ဒီအမှတ်တံဆိပ်၏ဖြန့်ဖြူးကုမ္ပဏီ၏ဖုန်းများနှင့် tablet များနှင့်အတူအသုံးဝင်သောစစ်ဆင်ရေးအမျိုးမျိုးဖျော်ဖြေဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Samsung ကဆိုလိုသည်, ထုတ်လုပ်သူကထုတ်ပေးအားလုံးနီးပါးကို Android-device များအတွက်တစ်ဦးကားမောင်းသူအထုပ်, ပါဝင်သည်။
လင့်ခ်ကနေတဆင့်တရားဝင် Samsung ကက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူဝန်ဖြန့်ဖြူး Kiyoshi:
Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန် Kies အစီအစဉ်ကို Download လုပ်ပါ
installer ကို run နှင့် software များ install လုပ်ရန်၎င်း၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
က Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အစိတ်အပိုင်းများရရှိရန်ဒုတိယနည်းလမ်း - က Samsung Kiyoshi ကနေသီးခြားစီဖြန့်ဝေယာဉ်မောင်းတစ်ဦးတပ်ဆင်ခအထုပ်ဖြစ်ပါသည်။
link ကို အသုံးပြု. ဖြေရှင်းချက်ရယူပါ:
Firmware ကို Samsung က Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် autoinstaller drivers တွေကို Download
ဒေါင်း avtoinstallyator ကိုဖွင့်နှင့်၎င်း၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Kies installer ကိုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများကို manipulate ရန်လိုအပ်သော avtoinstallyatora drivers တွေကိုပြီးစီးအပေါ်သို့ကို PC ရဲ့ operating system ကိုသို့ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မည်။
modes သာ up ကို
အဆိုပါပါ GT-S7262 နှင့် internal memory နှင့်အတူထိန်းသိမ်းရေးထွက်သယ်ဆောင်ရန်အထူးပြည်နယ်များသို့ device ကိုပြောင်းလိုအပ်ပါသည်: Recovery ကိုပတ်ဝန်းကျင် (rekaveri) နှင့် mode ကို "Dowload" (သို့ရာတွင်ဟုခေါ်သည် "Odin-mode ကို").
မသက်ဆိုင်သည်၎င်း၏အမျိုးအစား (စက်ရုံသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသော), စမတ်ဖုန်းကို Samsung များအတွက်စံယူနစ်ကိုချွတ်အပေါ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်သင့်သောဟာ့ဒ်ဝဲသော့, ပေါင်းစပ်ခြင်း, rekaveri ရိုက်ထည့်ရန်: "ပါဝါ" + "Vol +" + "အိမ်".
အဖြစ်မကြာမီမျက်နှာပြင်လိုဂိုက Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 ကိုဖော်ပြပေးသည်အတိုင်း, key ကိုလွှတ်ပေးရန် "ပါဝါ"နှင့် "အိမ်" နှင့် "Volume ကို +" menu ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပတ်ဝန်းကျင် restore ဖော်ပြရန်ကျင်းပရန်ဆက်လက်။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ် mode ကိုရန်ယူနစ်ပြောင်း, ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် "ပါဝါ" + "Vol -" + "အိမ်"။ ယင်းယူနစ်ပေါ်တစ်ပြိုင်နက်ထိုအခလုတ်နှိပ်ပိတ်ထားသည်။
Hold သော့သတိပေး screen ပေါ်မှာပြသခံရဖို့လိုအပ် "Warning !!"။ ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Volume ကို +" အထူးပြည်နယ်အတွက်ဖုန်းကို run ရန်လိုအပ်ကြောင်းအတည်ပြုပေးရန်။
မကြာခဏမဟုတ်ဘဲ device ကိုသူ့ဟာသူထက်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရေးပါမှုကြောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသင်၏ဖုန်းထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သောသတင်းအချက်အလက်။ သင်က Galaxy စတား Plus အား, တန်ဖိုးမြှသောဒေတာများလုံခြုံရာဌာန၌ပထမဦးဆုံးမိတ္တူ၏အစီအစဉ်တွင်ဘာမှတိုးတက်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လျှင်, system ကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုပြန်လည်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ကတည်းက device ကိုမှတ်ဉာဏ်အကြောင်းအရာထဲကနေဖျက်လိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သင့်ရဲ့ဖုန်းတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များ၏ backup တစ်ခုရဖို့ကအသုံးအများဆုံးသူတွေကိုအကြောင်းကိုအထက်ပါ link ကိုထဲလ်တခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးအတွက်နည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ Third-party developer များအနေဖြင့် tools တွေကိုသုံးပြီးအပြည့်အဝ backup တခုကိုဖန်တီးပေးဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အမြစ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ မော်ဒယ်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုညာရဖို့ဘယ်လိုသင်ယူဖို့, ဖော်ပြချက်ထဲတွင်အောက်ပါဖော်ပြထား "Mode ကို 2" စက်ပေါ် operating system ကို reinstall ဒါပေမယ့်တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားလျှင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးသား data တွေကိုဆုံးရှုံးမှုအချို့အန္တရာယ်နှင့်အတူ interfaced ကြောင်းအကောင့်သို့ယူရန်လိုအပ်ပေသည်။
အထက်ပါအပေါ်အခြေခံပြီးက Samsung GT-S7262 အပေါငျးတို့သပိုင်ရှင်တွေအလွန်အမင်းကြိုတင်အထက်ပါ Kies လျှောက်လွှာမှတစ်ဆင့် back up လုပ်ထားဖို့စမတ်ဖုန်း၏ system ကိုဆော့ဖ်ဝဲမဆိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှအကြံပြုခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော backup လုပ်ထားနှင့်တကွ, အစီအစဉ်ကိုစုတစုကိုနောက်ထပ်ကိုင်တွယ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မဆိုပြဿနာများကြုံတွေ့ရ devaysa ရင်တောင်သင်အမြဲတစ်ဦးကို PC ကို အသုံးပြု. အရာရှိတဦးက firmware ကိုမှပြန်လာပါ, ထို့နောက်သင့်အဆက်အသွယ်များ, SMS, ဓါတ်ပုံနှင့်အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို Samsung ထိရောက်စွာသာတာဝန်ရှိသူတဦးက firmware ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အမှု၌ data တွေကိုအရှုံးဆန့်ကျင်အာမခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်ကိုသတိပြုပါ!
Kies ကနေတဆင့် device မှဒေတာများ back up လုပ်ထားဖို့အောက်ပါပြုပါ:
Kies ကိုဖွင့်နှင့်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်, Android ကို PC အတွက်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ app ထဲမှာအဆုံးအဖြတ် device ကိုစောင့်ဆိုင်းဖို့ go "Backup ကို / Restore" Kiyoshi ၌တည်၏။
လာမယ့် option ကိုရန်အကွက်ကို Install "လူအပေါင်းတို့ပစ္စည်းများကို Select လုပ်ပါ" အပြည့်အဝ backup လုပ်ထားဒေတာဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်အချက်အလက်များ၏အချို့အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုဒြပ်စင်၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ရှေ့တွင်တစ်ဦးစစ်ဆေးမှတ် setting ရန်။
ကလစ်နှိပ်ပါ "Backup ကို" နှင့်မျှော်လင့်ထား
လိုအပ်သောလျှင်, စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုမှုအပိုင်းသတင်းအချက်အလက်များပြန်လာ "ဒေတာ Restore" Kies ၌တည်၏။
ရရှိနိုင် PC နဲ့စာနယ်ဇင်းဖြစ်လာသည့် disk ကိုတစ် backup လုပ်ထားရှေးခယျြဖို့လုံလောက်တဲ့ရှိပါတယ် "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး".
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ, အန်းဒရွိုက်မော်ဒယ် GT-S7262 ကို reinstall ကောက်ယူ, internal memory တစ်စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စနစ်၏တစ်ဦးချင်းစီပြန်စခြင်းသည်ရှေ့၌သင်တို့စမတ်ဖုန်း settings ကို reset တစ်ထုံးစံ rekaveri ၏ installation နှင့်ရုသအခွင့်အရေးများရယူမယ့်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံချက်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်မှာ "box ကိုထဲက" ၏မော်ဒယ်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုသက်ဆိုင်တဲ့ function ကိုစက်ရုံ rekaveri သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါသည်:
Recovery ကိုပတ်ဝန်းကျင်သို့ boot, select လုပ်ပါ "Wipe Data / factory reset"။ Next ကိုသငျသညျသတ်မှတ်ခြင်း devaysa အဓိကမှတ်ဉာဏ်အပိုင်းကနေဒေတာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ် "ဟုတ်ကဲ့ - အားလုံး user data ကို delete".
သတိပေးချက်တစ်ခုကို screen ပေါ်တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် "ဒေတာများပြီးပြည့်စုံသုတ်"။ ထို့နောက်အန်းဒရွိုက်အတွက်ပြန်လည်စတင် device ကိုလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ broaching သွားပါ။
ပထမဦးဆုံးဌာန၌ firmware ကို Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အားတစ်နည်းလမ်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါခြယ်လှယ်များ၏ရည်မှန်းချက်အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းရပါမည်။ ဒါကသင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖုန်းပေါ်မှာ get ချင်သောအရာရှိတဦးကသို့မဟုတ်ထုံးစံ firmware ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ၏ဖော်ပြချက်အနေဖြင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုတယ် "Method ကို 2: Odin" - အရှိဆုံးကိစ္စများတွင်အောင်မြင်မှုများနှင့်အမှားအယွင်းများနှင့်အတူဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲ၏စစ်ဆင်ရေးပြန်လာသောအကြံပြုချက်များစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းသို့မဟုတ်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမှအသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
program တစ်ခု Kiyoshi - သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို manipulate ရန် tool အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူက Samsung, တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာပေးပါသည်။ firmware ကို tool ကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုကအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောအကွာအဝေးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည် - က GT-S7262 များအတွက်ဖြန့်ချိနောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက်ဗားရှင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သာဖြစ်နိုင်အတူ။
လည်ပတ်မှုစနစ်၏ updated version ကို device ကို၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းထွက်သယ်ဆောင်ကြောင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုသူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမခံခဲ့ရပါလျှင်မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။
Kies ကို run နှင့်သင့်ဖုန်းကို cable ကို ချိတ်ဆက်. အဆိုပါ PC မှာ YUSB ဆိပ်ကမ်းကိုအတူဒွန်တွဲ။ ပရိုဂရမ်တွင်ယူနစ်များ၏ပြဌာန်းခွင့်အဘို့အစောင့်ပါ။
device အတွက် operating system ရဲ့ function စမ်းသပ်တပ်ဆင်ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များဗားရှင်းကိုအလိုအလျောက် Kiyoshi သင် program ကိုရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်အခါတိုင်းဖျော်ဖြေနေသည်။ သစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဒေါင်းလုပ်နှင့်နောက်ဆက်တွဲတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက် Android Developer server များပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်လျှင်, အစီအစဉ်ကိုသတိပေးချက်တစ်ခုပြသပါလိမ့်မယ်။
စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို" ဝင်းဒိုးကိုတည်ဆောက်အရေအတွက်ကိုနှင့် install လုပ်ထားသည့်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုအပေါ်ရှိရာသတင်းအချက်အလက်ပြသထားတယ်။
အဆိုပါအဆင့်မြှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်စတင်ခဲ့ပါလိမ့်မည် "Update ကို" ပြတင်းပေါက် "Software များ Update ကို"သင်စနစ်၏တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့ version ကို install လုပ်ပါ start ရှေ့တော်၌ထိုအသုံးပြုသူစေရမယ်သောလုပ်ရပ်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက််။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို update လုပ်ပေးခြင်း၏နောက်တစ်နေ့အဆင့်ဆင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနဲ့ automatic မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစောင့်ရှောက်မည်:
စနစ် partition ကို GT-S7262 မှတ်ဉာဏ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်း။
သငျသညျဤအဆင့်ကိုစတင်ခင်မှာ, တကအထူး mode သို့ device ကို reboot လုပ်ဖို့အစပျိုးလိမ့်မည် "ODIN MODE" - ကိရိယာ screen ပေါ်မှာ, သင်ညွှန်ပြအပ်ဒိတ် operating system ကိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုမည်သို့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပြီးစီးပေါ်၌ဖုန်းကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော Android ကိုစ reboot ပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်ရည်မှန်းချက်များဖြင့် Samsung Galaxy စတား Plus အား flash ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူအသုံးပြုသူအဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများအားလုံးသည်အခြားမော်ဒယ်များကိုထည့်လေ့မရှိဘာကြောင့်ကျိန်းသေသည့် Odin application ကိုအလုပ်လုပ်တတ်ရန်သင်ယူသင့်တယ်၏။ ဒီဆော့ဗ်ဝဲကိရိယာတခုစနစ်မှတ်ဉာဏ်ကဏ္ဍများကိုကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့် Android ဖုန်းပျက်ကျလျှင်ပင်နီးပါးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်အသုံးပြုသောနိုင်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် boot လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Firmware ကို Samsung က Android-device များ Odin အစီအစဉ်ကိုမှတဆင့်
လုံးဝကွန်ပျူတာတွေနဲ့ device ကိုတင်ပြစနစ်ဒါမခက်ခဲသည်ကို reset ။ ဒါခေါ် Single-firmware ကိုကနေ image ကိုအချက်အလက်များ၏မှတ်ဉာဏ်ယူနစ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုံလောက်တဲ့အများဆုံးအခြေအနေများအတွက်။ တရားဝင်ပါ GT-S7262 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းအပြေးနှင့်အတူအထုပ်ကိုအောက်ပါလင့်ခ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့မရရှိနိုင်ပါသည်:
Odin ခြင်းဖြင့် installation ကိုများအတွက် Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 ရဲ့ Single-firmware ကိုနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
image ကို Download လုပ်ပါနှင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Folder တစ်ခုထဲသို့သွင်းထားလေ၏။
ကြှနျုပျတို့၏ website အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကနေ Odin အစီအစဉ်ကို link ကို Download လုပ်ပါ, ထိုသို့ run ။
ဤယူနစ် Set "Download-Mode ကို" တစ်ဦးကို PC ကချိတ်ဆက်ပါ။ တစ်ဆဲလ်-proshivalschika ညွှန်ပြချက်ပြတင်းပေါက် COM-ဆိပ်ကမ်းအရေအတွက်ကိုပြသရပါမည် - တဦးတည်း device ကို '' ကိုမြင် '' ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အေပီ" စနစ်အတွက်လျှောက်လွှာအထုပ်ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အဓိကပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှာ။
ဖွင့်လှစ်သောဖိုင်ရွေးချယ်ရေး window ထဲမှာ, အထုပ်အပြေးသည်အဘယ်မှာရှိလမ်းကြောင်းကိုဝင်ဖိုင်ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြ "ပွင့်လင်း".
အရာအားလုံးတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည် - ကလစ် "Start"။ ယင်းနောက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ device ကို overwrite လုပ်နိုင်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ဒေသများ၏အဆုံးအဘို့အစောင့်ပါ။
Odin ပြီးဆုံးပြီးနောက်သတိပေးချက်တစ်ခုက၎င်း၏ window တွင်ပြသနေသည် "PASS!".
GT-S7262 ကိုသင် PC ကိုကနေယူနစ် disconnect နိုငျသညျ, OS ကိုအတွက်အလိုအလျှောက် reboot ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို pack ကို
စမတ်ဖုန်းများ၏စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအလေးအနက်မအောင်မြင်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ပျက်စီးလျှင်, ယူနစ် "okirpichilsya" နှင့် Single-flash ကို၏ installation အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, လျှော့ချတဦးတည်းဝန်ဆောင်မှုအထုပ်ကအသုံးပြုရပါမည်။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်သီးခြားစီပါ GT-S7262 မှတ်ဉာဏ်၏အဓိကအပိုင်း overwrite လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပုံရိပ်တွေများစွာပါဝင်ပါသည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် Multi-file ကိုဝန်ဆောင်မှုသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-file ကိုကနေ firmware ကို Download လုပ်ပါ
အထူးသဖြင့်ခက်ခဲကိစ္စများတွင် internal storage ကို devaysa (4 ခြေလှမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာသည်နံပါတ်တစ်ခု) ၏ပြန်လည်စတင်ခြင်း, ဒါပေမယ့်ဒါဟာအခြေခံအကျဆုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသတိနှင့်သာသည့်အခါလုံးဝလိုအပ်သောနှင့်အတူထွက်သယ်ဆောင်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအကြံပြုချက်များကိုအောက်ပါ chetyrehfaylovy ပေါ်မှအထုပ်ကို install ဖို့ကြိုးစားပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-file ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေလှမ်း, skip,
သင့်ရဲ့ PC ကို၏ drive ပေါ်တွင်သီးခြား directory ကိုသို့ system ကို images နဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-file ကိုပါဝင်တဲ့အတွက် archive ကိုအထုပ်။
Odin ကိုဖွင့်ပြီးကွန်ပျူတာ YUSB စက်ဘာသာပြန်ထားသော mode ကိုအပေါ်ဆိပ်ကမ်း cable ကို connect "ဒေါင်းလုပ်".
တနည်းခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်အစီအစဉ်တွင်စနစ်ပုံရိပ်တွေ Add "BL", "အေပီ", "က CP", "CSC" အောက်ပါစားပွဲပေါ်မှာနှင့်အညီဖိုင်ကိုရွေးချယ်ရေးပြတင်းပေါက်အစိတ်အပိုင်းများမှညွှန်ပြ:
ရလဒ်အဖြစ် proshivalschika ဝင်းဒိုးကိုအောက်ပါပုံစံကိုဆည်းပူးသင့်ပါတယ်:
မှတ်ဉာဏ်၏ partition (လိုအပ်ပါကအသုံးပြုနိုင်သည်):
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "တွင်း" Odin Odin အတွက်, နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ဖိုင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းမေးမြန်းမှုအတည်ပြု "အိုကေ".
စာနယ်ဇင်းများ "သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့"အဆိုပါ Explorer ကို window ထဲမှာညွှန်ပြခြင်း, ဖိုင်လမ်းကြောင်း "Logan2g.pit" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
လူအပေါင်းတို့သည်အစိတ်အပိုင်းများကိုပရိုဂရမ်နှင့်မဆိုအမှု၌အထက်ပါမှသစ္စာရှိမှု rechecking ပြုဒေါင်းလုပ်ပြီးနောက်ကလစ် "Start"သဖြင့် Samsung Galaxy စတား Plus အား၏ internal memory overwrite လို့ဒေသများ၏ထိပ်မှဦးဆောင်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုလယ်ပြင်မှတ်တမ်းအတွက် firmware ကို updates များကိုဖြင့်လိုက်ပါသွားခန့်3မိနစ်ကြာသည်။
အလုပ်၏ပြီးစီးအပေါ်သို့ Odin ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ် "PASS!" လျှောက်လွှာ window ၏အထက်လက်ဝဲဘက်ထောင့်၌။ ဖုန်းကို cable ကို YUSB ဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။
အလိုအလျှောက် reset Android ဖို့ပါ GT-S7262 ကို Download လုပ်ပါ။ ကိုယ်ကသာမျက်နှာပြင်ရဲ့ interface ကိုဘာသာစကား၏တစ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူစနစ်၏ကြိုဆိုစောင့်ဆိုင်းနှင့်အခြေခံလုပ်ငန်းလည်ပတ် parameters များကိုဆုံးဖြတ်ရန်နေဆဲဖြစ်သည်။
refurbished ကို Samsung က Galaxy စတား Plus အားစစ်ဆင်ရေးအဘို့အဆင်သင့်ပါ!
ရုသသည်အခွင့်အရေးများရတဲ့အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် rekaveri Installing
စိတ်တိုင်းကျ Recovery ကိုပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားဖွငျ့သီးသန့်လုပ်စံပြအပေါ်ထိရောက်အမြတ် SuperUser အခွင့်ထူး။ Framaroot စသည်တို့ကိုလူသိများ KingRoot အစီအစဉ် Kingo Root, GT-S7262, ကံမကောင်းအာဏာမဲ့ဆန့်ကျင်။
installation rekaveri လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လမ်းကြောင်းအခွင့်အရေးလက်ခံအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းများ၏မူဘောင်အတွင်းကသူတို့ဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းညွှန်ကြားချက်ထဲမှာပေါင်းစပ်နေကြသည်။ စိတ်တိုင်းကျပြန်လည်နာလန်ထူအောက်ကဥပမာမှာအသုံးပြုတဲ့အလတ်စား - က ClockworkMod Recovery ကို (CWM), နှင့်ကိုလက်ခံရရှိလမ်းကြောင်းအခွင့်အရေးများ၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်ရလဒ်များနှင့် SuperSU သတ်မှတ်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်း, - « CF Root ».
အောက်ကလင့်ခ်ကနေအထုပ်ကို Download လုပ်ပြီးမှတ်ဉာဏ်ကဒ် device ကိုဖြည်ပါဘူးပေါ်မှာထားပါ။
CFRoot လမ်းကြောင်း-အခွင့်အရေးနှင့် SuperSU စမတ်ဖုန်းကို Samsung က Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် Download
CWM Recovery ကို၏ပုံသဏ်ဌာ Download, မော်ဒယ်မှအဆင်ပြေအောင်နှင့်သင့် PC ကို၏ drive ပေါ်တွင်သီးခြား directory ထဲတွင်ပြုလုပ်ထားပါ။
အဆိုပါ ClockworkMod Recovery ကို (CWM) ကို Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် Download
Odin ကို Run, ရန်ယူနစ်ကိုသတ်မှတ် "Download-Mode ကို" သင့်ကွန်ပျူတာကချိတ်ဆက်ပါ။
တဦးတည်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "AR"အဲဒီဖိုင်တစ်ဖိုင်ရွေးချယ်ရေး window ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်လမ်းကြောင်းကို Specify "Recovery_cwm.tar"ဖိုင်နှင့်စာနယ်ဇင်းကို Select လုပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
အပိုင်းကိုသွားပါ "Options ကို" Odin နှင့် checkbox ကို uncheck "Auto Reboot".
စာနယ်ဇင်းများ "Start" တပ်ဆင် CWM Recovery ကိုပြီးပြည့်စုံသည်အထိနှင့်စောင့်ပါ။
အဆိုပါ PC ကိုကနေဖုန်းကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ, ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်က reinstall ။ ထိုအခါ key combination ကိုနှိပ် "ပါဝါ" + "Vol +" + "အိမ်" ပြန်လည်ထူထောင်ရေးပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ထည့်ပါရန်။
CWM Recovery ကိုခုနှစ်တွင်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန် Volume ကိုသော့ကို အသုံးပြု. "ဇစ် Install" နှင့်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးအတည်ပြု "အိမ်"။ နောက်ထပ်အလားတူပွင့်လင်း "/ သိုလှောင်မှု / sdcard ကနေဇစ်ကိုရွေးချယ်ပါ"ထိုအခါအထုပ်နာမကိုအမှီဖို့မီးမောင်းထိုးပြရွှေ့ "SuperSU + PRO + v2.82SR5.zip".
ထိပ်အစိတ်အပိုင်းသို့စတင်လွှဲပြောင်း "CF Root" နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးမှတျဉာဏျ device ကို "အိမ်"။ အားဖြင့်အရေးယူမှုအားအတည်ပြု "ဟုတ်ကဲ့ - UPDATE-SuperSU-v2.40.zip Install"။ စစ်ဆင်ရေး၏ပြီးစီးသည်အထိစောင့်ပါ - သဏ္ဌာန်အသိပေးစာ "sdcard ပြည့်စုံကနေ Install လုပ်".
နောက်ကျောကိုအဓိကမျက်နှာပြင်ပတ်ဝန်းကျင် CWM Recovery ကို (အမှတ်ကိုသွားပါ "နောက်သို့ Go"), ကို Select လုပ်ပါ "ယခု Reboot system ကို" Android နှင့်ထဲသို့စမတ်ဖုန်း reboot အဘို့အစောင့်ပါ။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်, SuperUser နှင့်သတ်မှတ်ထားလမ်းကြောင်း-မန်နေဂျာအခွင့်အရေးများနှင့်အတူ install လုပ်ပြီးသား device ကိုရယူပါ။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုက Galaxy စတား Plus အားအသုံးပြုသူများအနေဖြစ်ပေါ်လာပြဿနာများ၏ကျယ်ပြန့်ဖြေရှင်းပေးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Method ကို 3: မိုဘိုင်း Odin
သင်က Samsung စမတ်ဖုန်း flash ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေများနှင့်အသုံးမက Android-app ကို MobileOdin manipulate ရန် tool အဖြစ်ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ပါ။
အောက်ကခြေလှမ်းများ၏ထိရောက်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုများအတွက်စမတ်ဖုန်းကိုဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်လိုအပ်, အဆိုပါ OS ကိုသို့ Boot တက်, ထိုသို့လမ်းကြောင်းညာလက်ခံရရှိထားရပါမည်!
MobaylOdin မှတဆင့်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်ဖို့အတွက် Windows-based ဗားရှင်း proshivalschika သကဲ့သို့, တူညီတဲ့ Single-file ကိုအထုပ်အသုံးပြုသည်။ မော်ဒယ်အဘို့စနစ်ဝန်၏နောက်ဆုံးပေါ်တည်ဆောက်ဖို့ links ခြယ်လှယ်၏ယခင်နည်းလမ်း၏ဖော်ပြချက်ထဲတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ကညွှန်ကြားချက်ဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ, သင်ရည်ရွယ်တပ်ဆင်ဖို့အထုပ်ကို download လုပ်ပါ, သင်၏စမတ်ဖုန်းများ၏မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်မှာနေရာချဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
စတိုးဆိုင်ကို Google Play စ applications များထံမှ MobileOdin Install လုပ်ပါ။
မိုဘိုင်း Odin ကို Google Play Store မှ Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်များအတွက် Download
Program ကိုဖွင့်ပါနှင့်အမြစ်အခွင့်ထူးပေးရန်။ သငျသညျမထိ MobaylOdin နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့သတိပေးခံရတဲ့အခါ "ဒေါင်းလုပ်" နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သောရန်ပုံငွေများကိုစောင့်ပါ။
က program ကိုစ pre-loaded ရပါမည်က c ဟာ firmware ကိုအထုပ်ကို install ရန်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့မှတ် "ပွင့်လင်းဖိုင်ကို ... ", မိုဘိုင်း Odin အဓိက Menu ထဲမှာရှိပါသလား။ ဒီ option ကို Select လုပ်ပါထို့နောက်ရိုက်ထည့်ပါ "ပြင်ပ sdcard" image ကိုလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှင့်အတူဖိုင်စနစ်ကအဖြစ်။
Укажите приложению путь, по которому располагается образ с операционной системой. После выбора пакета, ознакомьтесь с перечнем перезаписываемых разделов и тапните "ОK" в окошке-запросе, содержащем их наименования.
အထက်ပါဆောင်းပါးပုံစံပါ GT-S7262 အပေါ် Android ကိုမထည့်သွင်းမီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသန့်ရှင်းရေးမှတျဉာဏျကဏ္ဍများ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ MobaylOdin သာဤအပိုင်းကိုအတွင်းနှစ်ခုခြစ်ကွက်များအတွက်အမှတ်အသားထားရန်လိုအပ်ပါတယ်သင်အသုံးပြုသူထပ်မံအရေးယူမရှိဘဲဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြု "Wipe" ထို program ၏အဓိက screen ပေါ်မှာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများ၏စာရင်း။
အဆိုပါ OS ကို၏ပြန်လည် install ပြုလုပ်စတင်ရန်, လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပိုင်းများ၏စာရင်းပွတ်ဆွဲ "လျှပ်တစ်ပြက်မီး" နှင့် tapnite အမှတ် "Flash ကို firmware ကို"။ အတည်ပြုချက်ကို box ကိုအန္တရာယ်-touch ခလုတ်များ၏မေးမြန်းမှုအသိအမြင်ပြသပါလိမ့်မည်ပြီးနောက် "Continue" မှတ်ဉာဏ် device အတွက်စနစ်နှင့်အတူအထုပ်ထဲကနေဒေတာတွေကိုလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါ။
မိုဘိုင်း Odin အလုပ်သင့်ရဲ့ smartphone ကို restart ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ ယန္တရားသည်မိမိ Boot တက်လိုဂိုမျက်နှာပြင်မော်ဒယ်ပေါ်ထင်ဟပ်အချို့အချိန်အတွက် "ဆွဲထား" ။ ပြီးစီးဖုန်းကိုအပေါ်သို့စစ်ဆင်ရေးက Android အတွက်အလိုအလြောကျပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်သည်အထိစောင့်ပါ။
စတင်ခြင်းပြီးနောက်ပြန်လည်နေရာချထားရေး OS ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအခြေခံတဲ့ parameters တွေကိုနှင့်ဒေတာဆယ်တင်ရေးကိရိယာ၏ရွေးချယ်ရေးပုံမှန်အားဖြင့်သုံးနိုင်တယ်။
Method ကို 4: အလွတ်သဘော EEPROM
ဟုတ်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူကထုတ်ပေးသဖြင့် Samsung GT-S7262, များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အရာရှိတဦးက firmware ကိုဗားရှင်း၏အခြေခံဖြစ်သော Android ကို 4.1.2, လမျးစခေတ်မမီတော့အများအပြားပိုင်ရှင်တွေခေတ်သစ် operating system မြားပိုမိုမော်ဒယ်များမိမိတို့၏ Device များပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရချင်သည်။ ဒါခေါ်ထုံးစံစက်ဘီး - ဤအမှု၌တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းချက်ကိုတတိယပါတီများနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်သည်အသုံးပြုသူများ၏မော်ဒယ်မှ Port အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်များသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
5.0 Lollipop နှင့် 6.0 Marshmallow ပေမယ့်ဒီဖြေရှင်းချက်အပေါငျးတို့သလေးနက်အားနည်းချက်များရှိသည် - - (အများကြီးဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ) ကင်မရာနှင့်အလုပ်မဆင်းမ်ကဒ်-card ကိုများအတွက်ဒုတိယ slot ကလက်ရှိစမတ်ဖုန်းများအတွက် Android ကို၏ခေတ်သစ်ဗားရှင်းကို install ဖြင့်ရရှိသောနိုင်သည့်ထုံးစံ firmware ကိုတစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားသောအရေအတွက်လည်းမရှိ။ ဤအစိတျအပိုငျးမြား၏အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း၏ဆုံးရှုံးမှုသင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအရေးပါမပါရှိလျှင်, သင်အင်တာနက်ကထုံးစံစက်ဘီး၏နေရာများမှာတွေ့ရှိသူတို့နှင့်အတူစမ်းသပ်နိုင်သည် - ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်ခြေလှမ်းများဖျော်ဖြေခြင်းအားဖြင့်ပါ GT-S7262 တပ်ဆင်နေကြသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ခုနှစ်, ဥပမာတစ်ခုပြုပြင်ထားသော operating system ကို install CyanogenMod 11၏အခြေခံပေါ်တွင်တည်ဆောက် အန်းဒရွိုက် 4.4။ ဒါဟာဖြေရှင်းချက်တည်ငြိမ်နှင့်စက်ပစ္စည်း၏ပိုင်ရှင်များပေါ်မှာမော်ဒယ်များအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးဖြေရှင်းချက်အားနည်းချက်များ၏လက်တွေ့ကငျးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်သုံးသပ်ပြီး။
အဆင့် 1: ပြုပြင်ထားသော rekaveri Install
ထုံးစံ rekaveri - စမတ်ဖုန်းအတွက်က Galaxy စတား Plus အားအလွတ်သဘောလည်ပတ်မှုစနစ်များတပ်ဆင်နိုင်စေရန်တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ သီအိုရီ၏ထောက်ခံချက်များအရသိရသည်ကိရိယာအပေါ်ရရှိသောဤရည်ရွယ်ချက်များ CWM Recovery ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်နိုင် "Mode ကို 2" ဆောင်းပါးအထက်တွင် firmware ကို, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်အလုပ်ပို, functional ဖြစ်စေသက်သာနှင့်ခေတ်မီထုတ်ကုန်အောက်ကဥပမာကိုကြည့် - TeamWin Recovery ကို (TWRP) ။
အတန်ငယ်အဖြစ်မှန်အတွက် TWRP ကို ​​Samsung စမတ်ဖုန်းတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများ။ လွှဲပြောင်းများအတွက်အထိရောက်ဆုံး tool ကသင့်လျော်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ဒေသတစ် desktop ကို Odin ဖြစ်ပါတယ် rekaveri ။ သငျသညျကိုဖော်ပြရန်ဤဆောငျးပါးတှငျအထကျတှငျဆှေးနှေးအသုံးပြုမှုတပ်ဆင်ညွှန်ကြားချက် CWM အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ "Mode ကို 2" firmware ကို device ကို။ သင်ပါ GT-S7262 မှတ်ဉာဏ်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အထုပ်ကို select သည့်အခါအောက်ပါလင့်ခ်ကနေရရှိသော image file ကိုမှလမ်းကြောင်းသတ်မှတ်:
စမတ်ဖုန်းကို Samsung က Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် TeamWin Recovery ကို (TWRP) Upload လုပ်ပါ
TVRP installed ပါလိမ့်မည်ပွီးနောကျ, သငျသညျပတျဝနျးကငျြသို့ boot ကြောင့်ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုသာခြေလှမ်းများ: အနှိပ်ခြင်းဖြင့်ရုရှားဘာသာစကား interface ကိုရွေးချယ်ခြင်း "ဘာသာစကားကို Select လုပ်ပါ" နှင့် activation switch ကို "အပြောင်းအလဲ Allow".
အခုဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူဘို့အပြည့်အဝပြင်ဆင် rekaveri ။
အဆင့် 2: Install ထုံးစံစက်ဘီး
TWRP ကိရိယာပေါ်မှာလက်ခံရရှိပြီးနောက်, လမ်းပေါ်မှာပြုပြင်ထားသော firmware ကို install လုပ်သာအနည်းငယ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ - ထိုအလွတ်သဘော system ထဲကနေအထုပ်ကို download လုပ်ပါနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်စက်ပစ္စည်းတွင်ပြုလုပ်ထားပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာ SyanogenMod ဖို့ကိုးကားစရာ:
Samsung ရဲ့ Galaxy စတား Plus အား GT-S7262 များအတွက် CyanogenMod ထုံးစံ firmware ကို Download လုပ်ပါ
ယေဘုယျခုနှစ်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း rekaveri စံအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်နှင့်၎င်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်မှာရှိနိုင်ပါဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ TWRP ကဲ့သို့သော tool ကိုလျှင်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်, စစျဆေးဖို့သေချာပါစေ။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Stepwise ဖြစ်စဉ်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများပါ GT-S7262 ထုံးစံ firmware ကို SyanogenMod ထွက်သယ်ဆောင်:
TWRP Start နှင့် installed စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုမှတ်ဉာဏ်ကဒ်-Nandroid backup လုပ်ထားဖန်တီးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, လမ်းတစ်လျှောက်တွင် go:
"အရန်ကူးယူခြင်းရဲ-set ကို" - "Drive ကိုရှေးခယျြ" - switch ကို "MicroSDCard" - ခလုတ် "အိုကေ";
အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်ဧရိယာမှပေးဆောင်ရပါမည် "EFS နဲ" - ကခြယ်လှယ်များ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရှုံး၏အမှု၌, IMEI-၏ ID ၏ပွနျလညျထူထောငျနှင့်အတူပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်လိုအပ်သော zabekapit ရမည်ဖြစ်သည်!
switch သည်ကိုသက်ဝင် "start ပွတ်ဆွဲပါ" နှင့် backup လုပ်ထားဘို့စောင့်ဆိုင်း - ထိုကမ္ပည်း "အောင်မြင်မှု" မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်း။
စနစ်မှတ်ဉာဏ်ကဏ္ဍများ devaysa ကို format:
လုပ်ဆောင်ချက် "သန့်ရှင်းရေး" သင့်အိမ် screen ပေါ်မှာ TWRP - "ဟုအဆိုပါရှင်းလင်း" - အားလုံးခြစ်ကွက်များအတွက်အမှတ် setting မှတ်ဉာဏ်ဧရိယာညွှန်ပြ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ "မိုက်ခရို sdcard";
သက်ဝင်နေဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပုံစံ Start "clean ပွတ်ဆွဲပါ", အက၎င်း၏ပြီးစီးမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်း - ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အသိပေးစာ "သန့်ရှင်းရေးကိုအောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့"။ အဓိကမျက်နှာပြင် rekaveri ပြန်သွားပါ။
အမှတ် "တပ်ဆင်" လမ်းတစ်အရိပ်အယောင်ဇစ်-file ကို kastomov ၏တည်နေရာ - - activation switch သည် main menu ကို TVRP အတွက် "flash ပွတ်ဆွဲပါ".
installation ကိုပြည့်စုံသောအခါ, သောအကြောင်းကြားစာကိုမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်မှာပုံပေါ်သည့်အခါဖြစ်ပါသည် "အောင်မြင်စွာဇစ် Installing"စမတ်ဖုန်း tapnuv ကို restart လုပ်ပါ "ဟုအဆိုပါ OS ကိုသို့ Reboot"။ ထို့ပြင်စနစ်ကနဦး setup ကိုမျက်နှာပြင် TsianogenMod ကိုဖွင့်ပြသလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။
အခြေခံ parameters များကိုသတ်မှတ်ခြင်းပြီးနောက်
ဖုန်းကို Samsung က GT-S7262 တစ်ပြုပြင်ထားသော Android ကိုအပြေးနေသည်
ပို။ Google ဝန်ဆောင်မှုများ
ဒီမော်ဒယ်အရှိဆုံးအလွတ်သဘော OS ကို၏ဖန်တီးသူ, သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ကို Google apps များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသို့အန်းဒရွိုက်-စမတ်ဖုန်းနီးပါးတိုင်းအသုံးပြုသူမှဒါအကျွမ်းတဝင်ထည့်သွင်းမထားဘူး။ GT-S7262 အဘို့အလို့ငှာ, ထုံးစံ firmware ကိုအောက်မှာလည်ပတ်, သင် module တွေလက်ခံရရှိ, သင်ကဆက်ကပ်အပ်နှံထားအထုပ်မှတဆင့် TWRP install လုပ်ရပါမည် - « OpenGapps »။ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့ညွှန်ကြားချက်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ပစ္စည်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်:
ဗီဒီယို Watch: trik membeli iphone bekas the trick to buyingaused iphone (စက်တင်ဘာလ 2019).